116 Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Hadda waa 12:34 ahay in Botswana. Waa maalintii koowaad buuxa ee Africa oo Rabbiga haatan waa shaqaynayaa. The markabka Reach dhan ka degay Johannesburg xalay oo u duulay Botswana saaka. Waxaan helay in ay la kulmaan tan oo taageerayaasha galabta at saxiix aynu ku samaynay at a dukaanka Christian hoose iyo waxaan lahaa qaar ka mid ah waraysiyada weyn. fiidkii Berri waa riwaayad hore ee safar ah oo aan la amped.
Waxaan dhab ahaan doonayaan safar this badiyey, waxaana jeclaan lahaa in aad caawinaad. Sidaad u caawin karto?
Sidoo kale waa inaad noo caawin tukasho, sidaa darteed in badan oo mahad naqi doonaa, waayo, anigoo ku hadlaya magaca barakada naga siiyo iyada oo ay baryadii badan.
Waxaan si adag u aaminsan yihiin in Rabbigu wuxuu isticmaalaa baryadii dadkiisa si ay u fuliyaan qorshayaal uu. Sidaas aad inoo caawin karto by tukanayay. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah siyaabaha aasaasiga ah ee aad ku tukatid noo oo nala:
1. Taas Rabbigu nagu sii lahaa caafimaad oo xoog leh
2. Taasi innaga qudheennu dhexdeenna ayaynu qaab lahaa sida addoommo
3. Taasi riwaayada si fiican u tegi lahaa
4. Taasi Rabbiga ilaaliyaan lahaa qoysaskeena intii aannu iska jira
5. Masiix Taasi waa la sarraysiin lahaa ee aannu samayn lahayn oo dhan
laba ka mid ah todobaad ka hor waxaan ka caajisaan qaaday iyo madax in dhinaca kale ee caalamka qaar ka mid ah dadka aan jeclaa. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, our Tababaraha safar Steadman, oo waxay ahaayeen waxaan madax in Australia si ay ugu adeegaan Ciise.
Waxa aynu ku sameeyey
Waxaan laba toddobaad hoos u qaatay hoos Safraan Brisbane, Melbourne, Perth, iyo Sydney. In kasta oo magaalooyinka aan ka mid ahaayeen xaflado badan oo ka bilowda 5,000-10,000 dadka dhallinyarada ah. riwaayado ka hor, waxaan u baxay inuu ka dugsiyada qaar ka mid ah oo iyaga lagu casuumay in ay ka soo shows the. Waxa aynu loo ogolaaday in la yidhaahdo at badan oo dugsiyada waxaa ku koobnayn (maxaa yeelay, waxay ahaayeen dugsiyada dawladda non-Christian), laakiin waxaan sameeyey fiican in la dhiiri geliyo ardayda iyo iyaga farta Masiix.
At riwaayada ah, oo dhan shan naga mid ah ku dhuftay marxaladda sida mid buuq badan, markabka unashamed. Waxaan ruxay sida ugu fiican ee aannu awoodda marxaladaha kuwii isku dayay in ay noqon sida cad ee suurtogalka ah ee ku saabsan Injiil in noo guuro inay sameeyaan waxa aannu ku samayn. In ka badan wax aan doonayay waawayn in ay ogaadaan Ciise! Waxaan had iyo jeer isku dayaan in ay hubiso in dadka waawayn ka tago wacdaro, ma by xirfadaha our, laakiin by Rabbigeenna.
Waxa aynu soo maray